မီးပျက်တဲ့ တည… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မီးပျက်တဲ့ တည…
Posted by ကို ထွဋ် on Jul 7, 2016 in Creative Writing | 16 comments
-တမြန်နေ့က အိမ်ကို သူခိုးကပ်တယ်ဗျ… ကပ်မကပ်က ခြေရာလက်ရာပျက်တာ ကြည့်ရင် သိတာပေါ့…
-ပထမဆုံး စ၀င်ကတည်းက သော့က ပုံစံပျက်နေပြီ…
-ဒုတိယ ကျွန်တော် ကျော်ကျော်သွားတဲ့ အိမ်ရှေ့ တည့်တည့်က ကြောင်ချေးပုံ ခြောက်ပုံ… သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ အိမ်ထဲကို ၀င်လိုက်တော့ သတိမထားမိဘဲ နင်းမိထားတာ ဖြစ်မယ်… ကြောင်ချေးနင်းထားတဲ့ ဖိနပ်ရာ နဲ့ ၃ ၄ လှမ်း ထားတာ…
-ပြီးတော့ ဖိနပ်ကို ချွတ်ပြီး ခြေဗလာနဲ့ ၀င်သွားတာ ဖြစ်မယ်…အိမ်ရှေ့ က တီဗွီက အန်းတိတ်ကိုး ဘယ်မက်မလဲ…
-ပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ နဲ့ နောက်ဖေး ဆက်ထားတဲ့ သစ်သားကြမ်းခင်းလေး ကျိုးနေတယ်… အဲဒါ မနင်းရမယ့်နေရာ ကျွန်တော်ပဲ သိတယ်… အဲနားလေးက နင်းလိုက်ရင် ပျော့လို့ ရှောင်ပြီး သွားသွားနေတာ ကြာပေါ့… ဟားဟား… ကြမ်းခင်းအောက်မှာလဲ ကြွက်တိုးထားတဲ့ အမှိုက်စတွေ ဒီကောင်နင်းမိမှာ မြင်ယောင်သေး… ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ခြေဖ၀ါးရာနဲ့ အောက်က အမှိုက်စတွေ ကပ်ပါသွားပုံပဲ…
-မျက်နှာကြက်က ကြက်ခိုးနဲ့ ပင့်ကူအိမ်တွေလဲ တော်တော်ရှင်းသွားတယ်ဗျ…ကျေးဇူးဗျ… ခေါင်းငုံ့ ၀င်နေရတာ ကြာပြီ… ရှင်းရမှာ ပျင်းလို့ ထားထားတာလေ…အဟီး…ဒီတိုင်း မမြင်မစမ်းနဲ့ ၀င်ရင် အဲကွန်းအောက်ဒိုးက ရန်ဖြစ်ရလွန်းလို့ အိမ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ အထိုင် သံတန်းကိုလဲ ၀င်ဆောင့်ဦးမှာဗျ… သူက ဘေးတစောင်း ၀င်မှရတာ မသိဘဲကိုး…
-အဖေအခန်းလဲ မက်ပြီး ၀င်ဦးမယ် ထင်တယ်… ၀င်လဲ အဲဒီမသုံးဘဲထားတဲ့ ဖျာလိပ်ထုပ်လိုက်ကြီးက အထဲကနေ ခံနေတော့ တော်တော်ကို ကျပ်ကျပ်သိပ်သိပ် ၀င်မှ ရမှာ… တံခါးပိတ်လိုက်တာနဲ့ အဲ့ဖျာလိပ်ထုပ်က ပြန်ပြုတ်ကျပြီး အထဲကနေ တယောက်က နောက်ပြီး တွန်းသလို ဖြစ်ဖြစ်နေတာ… ၀င်တော့ ၀င်ခဲ့တယ်ဗျ…အဲသဟာလဲ သူဘယ်လို လုပ်ပေးထားတယ် မသိ ဖွင့်လိုက်ရင် ပြုတ်မကျတော့ဘူးဗျ… ရှဲ့ရှဲ့…
-မီးဖိုချောင်လဲ ၀င်မွှေခဲ့ပုံပဲ… ဒါပေမဲ့ စ၀င်ကတည်းက တလွဲချည်းပဲ ဆိုတော့ သူလဲ သတိထားသွားပုံပဲ… နောက်ဖေးက ပထမအပုံကို မနင်းမိဘဲ အန်ထားတာကိုတော့ နင်းမိထားတယ်ဗျ.. ခြေဖ၀ါးရာကြီးက ထင်းနေတာပဲ…
-ပြီးတော့ အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားသေးတယ်… ခုနက ကြောင်စာအန်ဖတ်က အနီအစိလေးနဲ့ ခြေရာ လှေကားမှာ တွေ့တယ်… သော့လဲ ကြိုးကြိုးစားစားဖွင့်လိုက်ပုံပဲ သော့တုလေး တ၀က်ကျိုးစက သော့ခလောက်ထဲမှာ… နောက်တော့ ပွင့်သွားပါတယ်… နဂိုတည်းက အဲသော့က အဟန့်အနေနဲ့ထားတာလေ… သော့တံမလိုဘူး အောက်ကို ဆွဲချလိုက်ရင် ပွင့်နေပြီ… ဟားဟား သူခံလိုက်ရပြီလေ…
-ပွင့်လို့ ပျော်ပြီး မ၀င်လိုက်နဲ့ ကြောင်တွေ အပေါ်တက်မှာစိုးလို့ တံခါးအောက်မှာ လွတ်တဲ့ နေရာကို သစ်တုံးနဲ့ ခံထားတာ… ခလုတ်က တိုက်ဦးမှာ… ဒါပေမဲ့ အဲဒါတော့ မသေချာဘူးဗျ… အပေါ်တံခါးနဲ့ သစ်တုံးက ပုံပျက်တာပဲ တွေ့ရတယ်… တိုက်မတိုက်က မှန်းမရဘူး… လက်ရာပျက်တာပဲ သိရတယ်…
-အပေါ်မှာလဲ သူစိတ်ညစ်မှာပဲ… အလှူ လုပ်တုန်းက အောက်ထပ်မှာ ရှုပ်မှာစိုးလို့ ကုလားထိုင်တွေ အပေါ်တင်ထားတာ လမ်းလျှောက်စရာ နေရာတောင် မရှိဘူး… မင်္ဂလာဆောင် လက်ဖွဲ့တွေကလဲ မိုးကြီးတုန်းက မိုးပက်ပြီး ပါကင်ပုံစံကောင်းတာ တခုမှ မရှိတော့ဘူး…
-ကျွန်တော့်အခန်းတော့ ၀င်ခဲ့တာ သေချာတယ်… မီးကြိုးမလောက်လို့ အိပ်စတန်းရှင်းဆွဲထားတဲ့ ကြိုးက ပလပ်ပြုတ်နေတယ်… ၀င်ဝင်ချင်းဘယ်ဘက်မှာ ထားထားတဲ့ ကျွန်တော့ အ၀တ်ဟောင်းပုံ ပြုတ်ကျနေတယ်… အဲကွန်းမလာလို့ ပန်ကာ သွယ်ထားပြီး ပလပ်မဖြုတ်ဘဲထားလို့ ပန်ကာကြိုးလဲ ၀င်တိုက်ခဲ့ပုံပဲ ပန်ကာလဲပြုတ်ကျနေတယ်… နည်းနည်းတော့ ပိန်သွားတယ်…
-ငိုးမ သူခိုး… ယီးပဲ… ငါ့ပစ္စည်းတွေ ဖျက်ဆီးသွားတယ်…
-ယောကျာင်္း … ယောကျာင်္း…. ရှင်ဘာတွေ ယောင်နေတာလဲ!!!!
-ဘေးကို ကြည့်လိုက်တော့ မိန်းမက ကလေးကို ယပ်ခတ်ပေးနေတယ်…
-အော်… တော်သေး… အိမ်မက်ပဲ…
-ညဘက်ကြီး မီးပျက်လို့ ပူပြီး ကယောင်ကတန်းမက်ပြီး ထယောင်နေတာပဲ….
-ps; တကယ်တော့ အိမ်မက်ထဲက သူခိုးက ညံ့တာ.. လှေကားအောက်က အမေ ရှူးရှူးပေါက်နေကျ သေးအိုးထဲမှာ ရွှေတွေ အပြည့်ဆိုတာ မသိလိုက်ဘူး… သူလဲ ၀င်ချင်မှာ ဟုတ်ဘူးလေ… အဲနားမှာ ခြတောင်ပို့ကလဲ ရှိနေတော့ ဘယ်သူထင်မှာလဲရို့… ဒါက ရတနာအိုးဆိုတာကို….
ကျနော်တော့… ဘယ်နေရာ ဘာရှိတယ်ဆိုတာ သိသွားပြီ…
အိမ်လိပ်စာလေး တဆိတ်လောက် ပြောပါအုန်း။
ကျနော့် တပည့်ကို လွှတ်လိုက်မယ်..
အိမ်ကို ဆက်ဆက် ရောက်ဖူးပါတယ်… အဟဲ…
ဖတ်လိုက်ရတာ ကိုယ်တောင် သူခိုးဖြစ်သွားသလိုပဲ
ခိခိ.. ကျေးဇူး.. မွန်မွန်…
ကျေးကျေးပါ… မမချွိ… လာအားပေးလို့… အိမ်မက်ထဲက သူခိုးပါဗျာ…
သူကံမဆိုးရင် အနော်ဆိုးမှာလေ… ဦးမိုက်ရဲ့…
မီးပျက်သော ညတစ်ည သံသရာအလယ်
အစီအစဉ်ထဲမှာ စားဖို့လူလိုရင် ခေါ်နော်… ဟေးဟေး…ဒါမျိုးတော့ ကျွမ်းတယ်… ဘကြီးအောင်ရေ…
ခုနေရာသိအောင် ကွင်းဆင်းတာ :))
လာသာလာခဲ့ပါဗျာ… ကြောင်ကလဲ မရိုးစေရဘူး.. တနေ့တနေရာ ပါတာ… အန်တာရောပဲ… လူကလဲ စည်းကမ်းရှိပြီး ပစ်စလတ်ခတ်ထားတတ်တာလဲ… ဟီး… နောက်တခေါက်ဆို နောက်တမျိုး ပုံစံ ပြောင်းနေပြီ… ဟီးဟီး…
Post of the Day! :-)))))
ကျေးဇူးပါ… အရီး… ဟဲ… တကယ်အဖြစ်အပျက် နဲ့ စိတ်ကူး ပေါင်းထားတာ…
ကြောင်စာအန်ဖတ်က အနီအစိလေးနဲ့တဲ့ အတိကျဘဲ
အိမ်မှာ မီးဖိုထဲ ပွနေလို့ မနက်ကဘဲ ကျုံးခဲ့ရသေး
ကြောင်အန်ရင် အကြံအောင်တယ်ဆိုလို့ လေ
အဲ့ဒါနဲ့ တစ်ခုခုကြံစည်လိုက်တယ်…. ပြောပြ၀ူး